Miala amin'ny pôrnôgrafia amin'ny alàlan'ny maodely fanarenana dingana 3 | Reward Foundation
Home Miala amin'ny Porn Ny maodely fanarenana dingana telo an'ny Reward Foundation
Ny ekipa ao amin'ny The Reward Foundation dia namolavola modely fanarenana telo dingana hiresahana ny olan'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet. Fomba tsotra hampijanonana ny fampiasana sary vetaveta izany ary handresena ny fiankinan-doha. Ny famerenana amin'ny laoniny dia ny famelana ny ati-doha hanasitrana amin'ny fanindrahindrana tafahoatra izay nanangona volana na taona maro. Fomba tsotra mifototra amin'ny fikarohana momba ny fomba fiasan'ny fiankinan-doha sy fiankinan-doha amin'ny ati-doha. Azonao atao ny manandrana ireo sosokevitra eto miaraka amin'ny fanampian'ny vondron'olona fanarenana an-tserasera toa tsy fantatra anarana toy ny nofap.com or rebootnation.org. Mety hanapa-kevitra ianao fa aleonao ny vondrom-piarahamonina fanarenana tena toy ny programa 12 dingana. Raha tsy izany, ny mpitsabo iray voaofana amin'ny fiatrehana fitondran-tena manimba dia mety hanome ny ilainao.
Mpitsabo maro izao no vao manomboka mianatra momba ny fihenan'ny erectile nateraky ny pôrnôgrafia sy ireo olana hafa mifandray amin'ny pôrnôgrafia toy ny fahaketrahana na fitaintainanana. Ka alao antoka fa hijery an'ity tranonkala ity izy ireo na yourbrainonporn.com. Ny ankamaroan'ny mpitsabo dia voaofana amin'ny psikolojia nefa tsy mianatra momba ny fiasan'ny ati-doha. Tsy mora ny manome loka ny ati-dohanao mba hianatra fahazarana sy hianatra fika vaovao. Na izany aza, azo atao izany ary hanatsara ny fiainanao tsy misy farany. Betsaka ny bandy miresaka momba ny "famerenana amin'ny laoniny" ny ati-dohany. Tahaka ny ataontsika amin'ny solosaina iray izay mihitsoka rehefa misokatra ny varavarankely be loatra. Ireo reboot ireo na Kaonty fanarenana ataon'ny tanora an-jatony mampiseho ny fomba hanaovana azy.
Fitsipika momba ny maodely fanarenana
Ireto misy toro lalana tsotra telo eto aminay:
Aza mampiasa pôrnôgrafia intsony.
Mampitony ny saina.
Mianara fahaiza-manao lehibe.
Dingana 1 - Aza mampiasa pôrnôgrafia intsony
Ny fanarenana dia afaka manomboka fotsiny rehefa misafidy ny tsy hijerijery intsony ny olona ary hijanona tsy hanonofinofy momba ny pôrnôgrafia.
Mba hananana antony manosika hanandrana hampiato ny fanjifana sary vetaveta amin'ny Internet, ny mpampiasa dia mila miaiky fa manana ny mety hiteraka olana ara-pahasalamana ara-tsaina sy ara-batana mafy ary koa ireo olana ara-tsosialy. Mety hiafara amin'ny fahazoana firaketana heloka bevava aza. jereo Ahoana ny fomba hamantarana olana amin'ny pôrnônôma.
Ao amin'ny The Reward Foundation dia ampiasainay ny andian-teny hoe "esory ny vera amin'ny ratra". Fantatry ny rehetra fa ny ratra dia tsy afaka manomboka sitrana raha mbola ao anaty nofo ilay vera, ka mandratra. Ka ny fanesorana ny adin-tsaina amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mamela ny ati-doha hiverina. Izy io dia afaka manasitrana sy mamerina amin'ny laoniny ny fanairana mahazatra.
Atombohy amin'ny fanapahan-kevitra handao izany. Mametraha tanjona ho 1 andro. Ny tanjona dia ny hanomboka hamantatra ireo fambara amin'ny vatantsika ary hianatra tsara kokoa ny fomba hamaliana azy ireo. Mariho hoe amin'ny firy andro ianao no mety mijery pôrnôgrafia. Inona no ataon'ny 'Mamporisika'hijerena azy io toa? Izany no fahatsapana tosika ady ao amin'ny ati-doha. Ny faniriana ny hahazo ny neurochemical fahafinaretana mba hialana amin'ny alahelo tsy misy azy ireo. Mifaninana amin'ny faniriana hanaporofoana fa afaka mifehy tena isika. Izany famporisihana izany dia fampitandremana momba ny dopamine ambany na ny opioid ambany ao amin'ny ati-doha. Izy io koa dia manamarika ny fiandohan'ny valin'ny fihenjanana amin'ny fanentanana vokatry ny adrenaline manosika antsika “hanao zavatra IZAO!”
Ny fahafaha-miato mandritra ny fotoana fohy hametrahana freins saina sy hieritreretana alohan'ny fihetsika dia manampy hampihena ny lalana ary manomboka manala ilay fahazarana. Fanatanjahan-tena sarobidy io amin'ny fiezahana handrava izay fahazarana tsy tiantsika intsony. Manampy amin'ny fananganana fifehezan-tena izany. Iray amin'ireo fahaiza-miaina manan-danja indrindra hahazoana fahombiazana maharitra izany. Zava-dehibe toy ny faharanitan-tsaina na talenta izany. Ianaro ny fomba nisedra ny hafa rehefa nanandrana izany izy ireo. Isika rehetra dia tsy maintsy misafidy amin'ny fanaintainana roa, ny fanaintainan'ny fifehezan-tena na ny alahelo amin'ny nenina.
Hafainganam-pandeha iray andro haingana
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitsapana ny fiankinan'ny olona amin'ny filalaovana, media sosialy ary pôrnôgrafia.
Ity misy santionany avy amin'ilay boky Mampihetsi-po ny Fahafatesana: lahateny ampahibemaso amin'ny vanim-potoanan'ny fampisehoana, nataon'i N. Postman sy A. Postman. (Introduction).
“Profesora iray no mampiasa ilay boky miaraka amina fanandramana antsoiny hoe 'e-media haingana.' Mandritra ny efatra amby roapolo ora, ny mpianatra tsirairay dia tsy maintsy mifady amin'ny media elektronika. Rehefa nanambara ny fanendrena azy izy dia nilaza tamiko fa 90 isan-jaton'ny mpianatra no mikotroka, mieritreritra fa tsy olana lehibe izany. Fa rehefa tsapan'izy ireo ny zavatra rehetra tokony hafoin'izy ireo mandritra ny tontolo andro - telefaona finday, solosaina, Internet, TV, radio amin'ny fiara, sns. - “manomboka misento sy mitaraina izy ireo.” [fa] mbola afaka mamaky boky izy ireo. Niaiky izy fa ho sarotra ny andro, na dia mandritra ny valo amin'ny efatra amby roapolo ora aza dia hatory izy ireo. Nilaza izy fa raha mifady hanina izy ireo — raha mamaly telefaona, miteny, na mila manamarina mailaka tsotra fotsiny- dia tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany izy ireo. "Mahagaga ireo taratasy haveriko", hoy ilay profesora.
“Manana anaram-boninahitra toa ny 'The Worst Life of My Life' na 'The Experience tsara indrindra niainako hatrizay' 'izy ireo. Hoy izy ireo: 'Nihevitra aho fa ho faty. 'Nandrehitra ny fahitalavitra aho fa raha nahatsapa aho, Andriamanitra ô, tsy maintsy manomboka indray aho.' Ny mpianatra tsirairay avy dia samy manana ny fahalemeny manokana — ho an'ny sasany dia ny fahitalavitra, ny sasany ny telefaona finday, ny sasany amin'ny Internet na ny PDA azy ireo. Fa na manao ahoana na manao ahoana haben'ny halany ny mifady hanina, na sarotra ny maheno ny telefaona maneno nefa tsy mamaly azy, dia mandany fotoana hanaovana zavatra izay tsy nataony nandritra ny taona maro izy ireo.
Mandeha an-dalambe tokoa izy ireo hitsidika ny sakaizany. Nifampiresaka maharitra izy ireo. Ny iray nanoratra hoe: 'Nieritreritra ny hanao zavatra izay tsy noeritreretiko hatao akory aho.' Nanova azy ireo ny zavatra niainana. Ny sasany dia voa mafy ka tapa-kevitra ny hifady irery, indray andro isam-bolana. Amin'izany dia entiko mamakivaky ny tantara an-tsehatra izy ireo - hatrany Plato sy Aristotle mandraka ankehitriny - ary taona maro taty aoriana, rehefa nanoratra na niantso hiarahaba ireo mpianatra teo aloha, ny zavatra tadidiny dia ny haino aman-jery haingana. "
Ny fitsapana ny fotoana
Izao ny zanakalahin'ny mpanoratra an'ity boky ity amin'ny fanontana faharoa-polo:
“Ny fanontaniany dia azo apetraka momba ny teknolojia sy ny haino aman-jery rehetra. Inona no mitranga amintsika rehefa lasa tia olona isika ary avy eo dia voafitak'izy ireo? Manafaka antsika ve izy ireo sa mampiditra am-ponja antsika? Manatsara sa manimba ny demokrasia ve izy ireo? Mahatonga ny mpitondra antsika ho tompon'andraikitra bebe kokoa ve sa tsia? Mangarahara ve ny rafitra misy antsika sa kely kokoa noho izany? Manome antsika olom-pirenena tsaratsara kokoa ve isika sa mpanjifa tsara kokoa? Mendrika ve ny varotra? Raha tsy mendrika izany izy ireo, dia mbola tsy afaka manakana ny tenantsika tsy handray ilay zava-baovao manaraka isika satria izany fotsiny no tariby tariby, dia inona avy ireo tetika azontsika raisina hitazomana ny fifehezana? Fahamendrehana? Meaning? " Jereo ny news story momba ny fomba nitantanan'ny vondrona mpianatra mpianatra fahenina tao amin'ny sekoly Edinburgh iray rehefa nanao efijery 24 ora haingana izahay.
Fampiasana pôrnôgrafia manery?
Andramo izao hizaha toetra raha misy olona manao pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fomba hentitra.
Raha misy olona fantatrao na ianao manokana, maniry ny hanandrana ity fitsapana famongorana iray andro ity fotsiny ho an'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, dia mendrika izany. Raha mahomby ianao dia mety manandrana manitatra ny fanafoanana mandritra ny fotoana lava kokoa. Mety ho mora ara-dalàna ny manapaka fitondran-tena mandritra ny 24 ora, fa ny herinandro na telo herinandro dia tena fitsapana iray mahamarina ny fomba nanjary fahazaran-dratsy.
Ny fanombohana dia afaka manomboka saika eo noho eo. Ny ora voalohany, ny andro voalohany ary ny herinandro voalohany dia matetika ny mpamerina ny fiara rebooter no tsy afa-manoatra intsony ny filan'ny maso. Raha efa nampiofaninao nandritra ny fotoana ela ny ati-doha tamin'ny pôrnôgrafia dia ho elaela vao hiainana tsy misy pôrnôgrafia. Ny famerenana indray dia tsy dingana mora. Raha hitanao fa mora izany dia misaora fotsiny. Ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa sarotra izany. Na izany aza mialoha, dia forearmed. Ny fahalalana momba ny soritr'aretina ara-pihetseham-po na ara-batana izay sendra ny rebooter hafa dia nanjary fanampiana lehibe.
Miala mifanohitra amin'ny fanapahana
Ny fanapahana (fanenenana fotsiny) dia tsy mety amin'ny fihetsika manery indrindra. Ny fitadiavana fomba hampijanonana ny fampiasana sary vetaveta dia miavaka amin'izany. Raha vantany vao miady saina isika, ary mahazo izany dia 'manaova zavatra IZAO!' fahatsapana, fahazoana mora simika ny zavatra simika mahatsikaiky avy amin'ny finday avo lenta na ny takelaka dia mety loatra. Ny fampihenana ny fanjifana sary vetaveta dia tsy ampy ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​fa mampitombo ny fahazarana fotsiny. Ireo làlana mandroso tsara dia manjaka mora loatra. Mety maharitra amam-bolana, na taona maro aza amin'ny tranga maditra sasany, hampitomboana làlana vaovao mahasalama kokoa ary tsy ho voatarika hiditra ao anatiny. Mety hanandrana fitsapana sy hadisoana maromaro ihany koa ny mitazona ny fahazarana manelingelina ny tenantsika tsy hijery sary vetaveta lava. Eritrereto izao:
Atsaharo ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet
Mianara mampiasa Internet tsy misy pôrnôgrafia
Dingana 12, programa fanarenana SMART sy fandaharana mifanampy dia afaka manampy avokoa
Ianaro ny fomba valisoa miasa ny ati-doha. Ny fahatakarana fa io fanerena io dia toe-piainana tsy mifehy ny atidoha dia manampy amin'ny fanamorana ny fifadian-kanina
Fantaro ireo antony nateraka sy fampisehoana nanaparitaka ny fiankinan-doha nataonao. Mitadiava fomba hisorohana azy ireo
Dingana 2 - Ampandehanana ny saina
Ny ankamaroan'ny mifady hanina dia mahazo tombony amin'ny karazana fanohanana ara-tsaina. Izany dia mety ho avy amin'ny namana sy fianakaviana na avy amin'ireo matihanina miasa ho mpitsabo. Izany no mahatonga ny fitiavana amin'ny endrika fifamihinana, fifamihinana, fisakaizana, fifampitokisana ary fifamatorana dia afaka mampisondrotra ny haavon'ny oxytocine neurochemical ao amin'ny ati-doha. Oxytocine dia manana toetra manampy betsaka hanampiana amin'ny fandanjalanjana ny fizotry ny herinaratra sy ny neurochemicals:
Cortisol (adin-tsaina sy fahaketrahana) ary dopamine (filana)
Mampihena ny soritr'aretin'ny fisintahana
Manamafy ny fifandraisana sy ny fahatsapana filaminana
Mampitony ny fahatsapana fanahiana, tahotra ary ahiahy
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hananana faharetana amin'ny adin-tsaina sy ny fihenjanana amin'ny fiainana andavanandro dia ny fialan-tsasatra ara-tsaina tsy tapaka. Ny dikan-teny iray izay tena malaza ankehitriny dia antsoina hoe Mindfulness. Midika izany fa mitandrina tsara ny zavatra tsapantsika na eritreretintsika mandritra ny fotoana fohy amin'ny fomba tsy mitsara. Raha tokony hanery na hanandrana tsy hiraharaha ireo eritreritsika manahirana antsika isika na tsy hanokana fotoana hiatrehana izany dia avelantsika hiditra ao an-tsaintsika izy ireo ary hijery azy ireo nefa tsy manandrana tsy miraharaha azy ireo na mamaha azy ireo na koa mitsara azy ireo amin'ny fomba mahery vaika.
Ny fampifangaroana mahomby amin'ny teknika mpanohana dia afaka manampy. Ny ankamaroany dia mampiakatra ny haavon'ny oxytocine antsika.
Ny fahatsiarovan-tena dia miasa tsara miaraka amin'ny Cognitive Behavioural Therapy (CBT). Any am-piasana CBT eo amin'ny sehatra mahatsiaro tena sy mitombina hanovana fahazaran-dratsy amin'ny eritreritra sy ny fahatsapana, ny fisaintsainana fahatsiarovan-tena dia miasa amin'ny ambaratonga tsy mahatsiaro tena sy tsy am-bava lalina kokoa.
Motivational Interviewing (MI) dia nanaporofo fa mahasoa ihany koa amin'ny fanampiana ireo mpampiasa zava-mahadomelina tanora hanjary tsy hifantoka amin'ny alàlan'ny fomba fijery mampahery.
Fandaharana fampihenana ny fihenan-tsaina
Ny scan'ny MRI dia naneho ny fihenan'ny volondavenona (sela nerveux) amin'ny amygdala (tebiteby)
Mitombo ny volondavenona amin'ny hippocampus - fitadidy sy fianarana
Namokatra tombony ara-psikolojika izay mitohy mandritra ny andro
Notaterina ny fihenan'ny adin-tsaina
Rakipeo fisaintsainana maimaimpoana
Use our fanazaran-tena amin'ny fialan-tsasatra lalina hanampy anao hiala sasatra sy hanova ny ati-dohanao. Amin'ny fampihenana ny famokarana neurochemical stress, avelanao ho sitrana ny vatanao. Ny sainao dia afaka mampiasa ny angovo hahazoana fahitana mahasoa sy hevitra vaovao.
Ny hevitra ato amin'ity fahatelo ity dia ny hampiala-tsaina raha tsy mampiseho mariky ny hetsika ara-batana mba hahafahanao manao izany amin'ny lamasinina na rehefa misy ny hafa. Maharitra 18.13 minitra.
Rahoviana no mila miala sasatra lalina?
Dingana 3 - Mianara fahaiza-manao lehibe
Ny olona sasany dia manana fiaviana ara-pirazanana na fahalemena teraka izay midika fa mila bebe kokoa amin'ny neurochemical, dopamine, izy ireo mba hahatratrarana ny haavon'ny fiara sy ny fahafinaretana amin'ny olona tsy misy io fiovana io. Ireo olona ireo, isan-jato kely, dia mora mihinana fiankinan-doha kokoa noho ny hafa. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia latsaka amin'ny fihetsika manery na fiankinan-doha noho ny antony roa lehibe.
Nahoana no fiankinan-doha?
Voalohany dia manomboka mitady fahafinaretana sy miala voly toa ny olon-drehetra izy ireo fa ny fitsaboana indraindray dia mety ho lasa fahazarana mahazatra. Voafitaka mora foana isika amin'ny fampanantenan'ny 'fahafinaretana' na dia very aza ny asa, ny fanaintainana, ny fihenan-tsofina, ny fotoana tsy nifanarahana, ny fampanantenan-dratsy. Rehefa mandeha ny fotoana ny fanerena ara-tsosialy sy ny dokam-barotra dia mety hitarika antsika hiboka amin'ny fahafinaretana izay miteraka fiovan'ny ati-batana amin'ny rafitry ny valisoa izay manasarotra ny fanoherana ny filana. FOMO na 'tahotra sao very' dia kilalao saina ara-tsosialy tokony ho fantatsika ihany. Ny media sosialy dia manampy amin'ny famolavolana an'io kankana ati-doha io.
Ny fomba faharoa mety hivoaran'ny fiankinan-doha dia avy amin'ny faniriana tsy mahatsiaro tena hisorohana ny toe-javatra maharary na ezaka amin'ny fiainana isan'andro. Mety hitranga izany satria tsy mbola nianatra ny fahaiza-miaina ny olona iray hiatrehana ireo tranga toy ny toe-javatra vaovao, fihaonana amin'ny olona, ​​fifandonana na fifanolanana ao amin'ny fianakaviana. Ny fikatsahana fahafinaretana amin'ny voalohany dia mety hanamaivana ny tsindry na hampitony ny fanaintainana, saingy amin'ny farany dia mety ho lasa adin-tsaina lehibe kokoa noho ilay olana voalohany izy io. Ny fiankinan-doha dia mahatonga ny olona iray hifantoka tanteraka amin'ny filany manokana ary tsy afaka mandray fihetseham-po amin'ny hafa. Miorina ny fihenjanana ary eo ambonin'izy ireo ny fiainana, tsy voafehy intsony. Ireo mpanao dokam-barotra momba ny hetsika mampihetsi-po toy ny pôrnôgrafia, alikaola, filokana, sakafo junk, ary filalaovana vitsivitsy, manararaotra ny faniriantsika hikatsaka fahafinaretana ary tsy hiraharaha ireo fihetsem-po na toe-javatra maharary mahatafiditra ezaka.
Fisorohana ny famoizam-po
Ny fianarana ny fahaiza-manao fiainana fototra dia afaka manampy amin'ny fanovana izany ary mampihena ny risika hianjera amin'ny fahaketrahana sy fiankinan-doha. Ny fanesorana ny fihetsika mampiankin-doha fotsiny matetika dia tsy ampy. Ny valin'ny fientanam-po amin'ny adin-tsaina dia mbola ho eo ary hamela ilay olona marefo ary tsy afaka miatrika fitsikerana na fifandonana. Betsaka ny tantaran'ny olona mahavita mandao ny alikaola na zava-mahadomelina ary mahita asa fotsiny ka potraka amin'ny famantarana voalohany ny tsy fifanarahana, avy eo miverina indray. Misy koa tantara tsara momba ny zatovolahy sy tovovavy izay mahita tanjaka sy herim-po vaovao hiatrehana toe-javatra sarotra rehefa miala amin'ny pôrnôgrafia izy ireo. Ny sasany miresaka momba ny fampivelarana ny “superpowers”.
Ny olona ao anatin'ny fahasitranana dia mahomby indrindra ary misoroka ny famerenana amin'ny laoniny rehefa mampivelatra ny fahaizany mivelatra izy ireo mba hanitatra sy hananganana ny fiainany ary hahatonga azy io hahaliana sy hanatontosana bebe kokoa. Midika izany fa ny fahazoana ny fiara sy ny fahafinaretana avy amina loharanom-pahasalamana mahasalama indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny hafa ary famelana ny henatra, fahatsapana ho meloka ary fahatsapana ho tsy tiana, mitoka-monina na irery.
Betsaka ny fiainana samy hafa izay fantatra fa manampy:
Fahaiza-miaina hananganana fiadanam-batana
Mianatra mahandro sy mankafy sakafo mahasalama tsy tapaka
Mahazoa torimaso famerenana amin'ny laoniny, 8 ora isan'alina ho an'ny olon-dehibe, 9 ora ho an'ny ankizy sy ny tanora
Fanatanjahan-tena, indrindra ny fandaniana fotoana amin'ny natiora
Fanazaran-tena fialan-tsasatra ara-tsaina - oh: fahatsiarovan-tena na avelao hisintona ny sainao fotsiny
Fahaiza-manao fiainana hananganana fahatokisan-tena
Ny saina tsy voaofana dia tsy mahavita na inona na inona. Ny fianarana fahaiza-manao vaovao tsikelikely dia afaka mampiorina fahatokisana. Mila fotoana. Ny saina mivelatra dia tsy miverina amin'ny taloha intsony. Tsy misy olona afaka manaisotra fahaizana mianatra amintsika. Arakaraka ny ananantsika fahaizana no ahafahantsika miaina bebe kokoa amin'ny toe-javatra miova. Ireo fahaiza-manao ireo dia mampihena ny adin-tsaina amin'ny fiainana misavoritaka
Mianara mifehy ny eritreritrao, ny tsy firaharanao ary ny nofinofy momba ny firaisana
Fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fandaminana - fanazarana fanadiovana sy fiantsenana; mitazona ny taratasy, faktiora ary tapakila ilaina amin'ny filaharana
Ianaro ny fomba fangatahana asa ary miomana tsara amin'ny resadresaka
Fahaiza-manao ara-bola - mianatra manao teti-bola ary raha azo atao, mitsitsy
Fahaizana fiainana hifandray amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsara kokoa
Fianarana ny hamafisina raha ilaina fa tsy mifanohitra amin'ny mahery setra, mahery setra na mandefitra
Fahaizana mihaino sy misaintsaina
Fahaiza-manao amin'ny filalaovana
Fiaraha-miasa ara-pahasalamana, ohatra ny fifandraisan'ny mpianakavin'ny vanim-potoana
Ny fahaiza-miaina mivelatra, manitatra ary manangana ny tenantsika amin'ny maha-olombelona tanteraka antsika
Mahay mamorona fihetseham-po anaty- mianatra mihira, mandihy, mitendry zavamaneno, manao sary, mandoko, manoratra tantara
Mahafinaritra, milalao lalao, mihomehy, mitantara sangisangy
Asa an-tsitrapo, fanampiana ny hafa
Ity pejy web ity dia nanome drafitra tsotra fotsiny momba ny modely fanarenana The-Reward Foundation 3-dingana. Hamokatra fitaovana bebe kokoa izahay hanohanana ireo singa tsirairay amin'ny volana ho avy. Azonao atao ny manao kilasy amin'ireto fahaiza-miaina ireto any am-pianarana, klioban'ny tanora na eo amin'ny fiaraha-monina misy anao. Zahao izy ireo ao amin'ny tranombokinao eo an-toerana na amin'ny Internet.
Ireto indray ireo dingana tsotra telo nataonay:
1 - Aza mampiasa pôrnôgrafia intsony
2 - Ampandehanana ny saina
3 - Mianara fahaiza-manao lehibe
<< Mandeha amin'ny sary vetaveta Program momba ny fisorohana dingana 3 TRF >>